Gmail အကောင့်ရှိသူတိုင်း သတိထားရတော့မယ့် YouTube ရဲ့ မူဝါဒအသစ် - The Lifestyle Myanmar
Home News Gmail အကောင့်ရှိသူတိုင်း သတိထားရတော့မယ့် YouTube ရဲ့ မူဝါဒအသစ်
Update သတင်းတစ်ခုအဖြစ် YouTube ရဲ့ အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Policies အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Email ဖြစ်ဖြစ်၊ Notifications ဖြစ်ဖြစ် YouTube က သူ့ရဲ့ Terms and Conditions တွေပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အကြောင်း အကြောင်းကြားတာရရှိကြမှာပါ။
YouTube ဟာ သူ့ရဲ့ မူဝါဒတွေကို ပြောင်းလဲမှုလုပ်တာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး လာမည့် ဒီဇင်ဘာလကစတင်ပြီး သက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Google, Facebook, Twitter စတဲ့ လူသုံးများတဲ့ Platforms တွေရဲ့ မူဝါဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး သိပ်ဂရုမစိုက်ဖြစ်ကြပေမယ့်၊ ဒီတစ်ခေါက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Policy တစ်ခုကတော့ အားလုံးအတွက် သတိထားရမယ့် အရေးကြီးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါဘာလည်းဆိုတော့… YouTube ဟာ Online Video Platform တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ အကြီးဆုံး Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ YouTube Videos တွေက တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် FREE ဖြစ်ပါတယ်။ Google Account တစ်ခုရှိတာနဲ့ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Google ရဲ့ FREE Service တွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ YouTube လို FREE Service ကြီးက ဘယ်ကနေပိုက်ဆံဝင်လဲဆိုတာ မသိကြသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ YouTube Videos တွေကြည့်တဲ့အခါ ကြည့်နေရင်း Ads လို့ခေါ်တဲ့ ကြော်ငြာလေးတွေတက်လာတာ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီလို ကြော်ငြာတွေကနေ Google နဲ့ Publisher တွေက ပိုက်ဆံရကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ YouTube Policy အရ မိတ်ဆွေက ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ Computer (PC) နဲ့ဖြစ်စေ YouTube ကြည့်နေကျဆိုရင် တစ်ခုတော့ သတိပြုဖို့လိုပါပြီ။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဖုန်းဖြစ်စေ၊ Computer (PC) ဖြစ်စေ Browser မှာ Ads တွေကို Blocked လုပ်နိုင်တဲ့ Extension တွေ (Eg; AdBlock Plus, uBlock, etc…) အလားတူ အသုံးပြုထားတာကို YouTube က Detect လုပ်လို့သိခဲ့ရင် မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Google Account (Users’ Accounts) ကို Block လုပ်ခံရနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။
❝ အဲ့ဒီ Extensions တွေက YouTube Videos တွေမှာပေါ်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကို မမြင်ရအောင် Blocked လုပ်တာမျိုးဖြစ်တာမို့ အဲ့လိုလုပ်ထားတာ သိခဲ့ရင် မိတ်ဆွေရဲ့ Google Account ကို Permanent Banned တာမျိုးထိ လုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ် ❞
သူရဲ့ဖော်ပြချက်ထဲမှာတော့ ဒီလိုလေးရေးထားပါတယ် –
” YouTube may terminate your access. Or your Google account’s access to all or part of the Service if YouTube believes, in its sole discretion, that provision of the Service to you is no longer commercially viable.”
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီ Policy ပြောင်းလဲမှုမှာ YouTube ရဲ့ Service ကိုပဲ Ban ခံရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ Google Account နဲ့သုံးရတဲ့ အခြား Service တွေဖြစ်တဲ့ Gmail, AdSense, AdWords, etc… အစရှိတဲ့ Google Service အားလုံးကနေပါ မိမိ Google Account ရဲ့အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီ Policy ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှုဟာ YouTube တစ်မျိုးတည်းအတွက်သာဖြစ်ပြီး အခြား Websites တွေ၊ Platforms တွေက Ads ကြော်ငြာတွေကို Blocked တာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး သက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Ads Blocker တွေ၊ Extensions တွေကို Browser မှာ Installed လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် YouTube ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ Ads တွေအတွက် Blocked လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Ads Blocker Extensions တွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး YouTube အနေနဲ့လည်း ဘယ်လို Detect လုပ်ပြီး ဖမ်းမလဲ? ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးထိ အရေးယူမလဲ? ဆိုတာတွေကို တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးတဲ့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ Gmail Account (Email) က မိမိတို့အတွက် အရေးပါတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ Extensions တွေကို Disable (or) Uninstalled ပြုလုပ်ထားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောရင်း နိဂုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Credit: Win Mobile
Previous articleမီးလောင်နေတဲ့တိုက်ခန်းကနေ မိဘတွေကိုကယ်တင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုစတေးခဲ့တဲ့ သတင်းကြေငြာသူလေး
Next articleဘုရားက အလှူခံပုံး ဖောင်ထွင်းနေတဲ့ သူခိုးကို သတ္တိရှိရှိ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးလိုက်သူ